Career Gallery | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
Posted on January 22, 2018 by MYEO in Local, Work //0Comments
Deadline : 31 Jan 2018
Location : Thalun International School (Ahlone Campus), 108 Hnin Si St, Ahlone Township, Yangon
Duration : 9am-5pm
Date :3February 2018(Sat)
Type : Free, Lunch Provided
Join CareerGallery2018,afree event for undergraduate students and entry-level professionals. Meet with established professionals and opinion leaders fromavariety of fields to answer your questions about job hunting and your career.
Only people with confirmation email are allowed entry.
Career Gallery ဆိုတဲ့ ပွဲလေးကတော့ လူငယ်တွေ မေးလေ့မေးထရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေးနိုင်စေဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ အတူတူဆွေးနွေးကြမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို တိုးတက်အောင် လုပ်မယ်။ Inspire ဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သူတွေနဲ့ လည်း တွေ့ဆုံပြီး လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားတာမို့ Registration Link ကနေ အမြန်ဆုံး စာရင်းသွင်းပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Confirmation Letter ရရှိသူများသာ ပွဲကို တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Career Gallery ဆိုတဲ့ ပှဲလေးကတော့ လူငယျတှေ မေးလမေ့ေးထရှိတဲ့ မေးခှနျးတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး ဆှေးနှေးနိုငျစဖေို့ အတှကျ ရညျရှယျပါတယျ။ ဒီပှဲမှာ အတူတူဆှေးနှေးကွမယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ကြှမျးကငျြမှုတှကေို တိုးတကျအောငျ လုပျမယျ။ Inspire ဖွဈဖို့ကောငျးတဲ့ သူတှနေဲ့ လညျး တှဆေုံ့ပွီး လလေ့ာနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ လူဦးရေ ကနျ့သတျထားတာမို့ Registration Link ကနေ အမွနျဆုံး စာရငျးသှငျးပေးဖို့ ဖိတျချေါပါတယျ။ Confirmation Letter ရရှိသူမြားသာ ပှဲကို တကျရောကျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။